We Fight We Win. -- " More than Media ": ဖိလစ်ပိုင် အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် ၁၀ ဘီလီယံသုံးစွဲ မည်
ဖိလစ်ပိုင် အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် ၁၀ ဘီလီယံသုံးစွဲ မည်
ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက နိင်ငံတော် အခြေခံဆောက်အအုံတွေကို ပြုပြင်ဖုို့ ပီဆို လေးရာဘီလီယံ
( အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉ .၆ ဘီလီယံ) ဖိုးသုံးစွဲမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီငွေကို
လေဆိပ်တွေ၊ လမ်း၊ တံတား တွေမှာသုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် မှာ အစိုးရက ၁၀ ဘီလီယံနီးပါးသုံးစွဲ နေချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့
ကျောင်းသားတွေဟာ ဗွက်ထဲမှာရုမ်းကန် နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့
သဘ၀ဓါတ်ငွေဟာ ကမ္ဘာမှာ ၁၁ ခုမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
MANILA (Reuters) - The Philippines has set an infrastructure budget of over 400 billion pesos ($9.6 billion) for 2013, the highest ever, as Manila pursues major upgrades of its ports, airports, road and bridge networks to speed up growth, the Budget chief said on Monday.
"The total infrastructure budget of the government will hit more than 400 billion pesos, or 19.3 percent more than the equivalent figure this year, so you can imagine the impact on employment, on reducing cost of doing business as well as expanding opportunities for the private sector," Budget Secretary Florencio Abad told reporters.
Manila is planning to propose to Congress an 11 percent increase in its spending budget to2trillion pesos ($48 billion) for 2013 against this year's 1.8 trillion pesos.